က Round Shape SKU NO.271-272-273-274-275-276 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းအတွက်တရုတ် casserole | SJZ JINXUAN
ခြွင်းချက်မီးဖိုချောင်-to-စားပွဲတင်ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်အဆိုပါဖန် casserole အကြာတွင်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်စတိုးဆိုင်၏အစားအစာများချက်ပြုတ်ဖို့ကလွယ်ကူစေပါသည်။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးယဉ်ဝတ်ပြုမှုအတွက်မဆိုစားပွဲ setting ကိုမှမီးဖိုကနေလှလှပပအဆိုပါ casserole အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်စားကြွင်းစားကျန်ညဉ့်ရဲ့အဆုံးမှာညာဘက်ကျောရေခဲသေတ္တာထဲမှာသွားနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : မီးဖိုမှရေခဲသေတ္တာထဲကနေတိုက်ရိုက်ဖန် casserole မရွှေ့နှင့်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မီးဖိုတဖို၌ reheating မတိုင်မီစားနပ်ရိက္ခာနွေးထွေးကြကုန်အံ့။ ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ potholder သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ ...
အဆိုပါဖန် casserole ကလွယ်ကူအကြာတွင်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်စတိုးဆိုင်၏အစားအစာများချက်ပြုတ်ဖို့ပါစေ။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးယဉ်ဝတ်ပြုမှုအတွက်မဆိုစားပွဲ setting ကိုမှမီးဖိုကနေလှလှပပအဆိုပါ casserole အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်စားကြွင်းစားကျန်ညဉ့်ရဲ့အဆုံးမှာညာဘက်ကျောရေခဲသေတ္တာထဲမှာသွားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : မီးဖိုမှရေခဲသေတ္တာထဲကနေတိုက်ရိုက်ဖန် casserole မရွှေ့နှင့်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မီးဖိုတဖို၌ reheating မတိုင်မီစားနပ်ရိက္ခာနွေးထွေးကြကုန်အံ့။ ပူဖန်ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ potholder သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ။
အဆိုပါဖန် casserole သမားရိုးကျမီးဖိုတဖို၌ဒါမှမဟုတ်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုတဖို၌အစာအာဟာရဖုတ်သို့မဟုတ် reheat ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မစိုက်, ဖုတ်နောက်ဆုံးရလာဒ်များကျော်ကဆက်ပြောသည်ထိန်းချုပ်မှုပေးသည့်အခါအစားအစာများ၏တိုးတက်မှုမှာ peaking ဘို့ခွင့်ပြုဖန်နှစ်ဖက်မှတဆင့်ကြည့်ရှုပါ။
ဤရွေ့ကား casseroles အပူချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ shattering ရန်ထို့ကြောင့်လျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့များအတွက် borosilicate ဖန်-စံပြနှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : Glass ကို casserole တစ်ကင်အောက်မှာတစ်ဦး stovetop အပေါ်, ဒါမှမဟုတ်အရက်သို့မဟုတ်အဆင်သင့်အပူ burners တွေကနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အပူအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံခြမ်းလက်ကိုင်လုံခြုံစွာပြန်နှင့်ထဲကမီးဖိုနှင့်မီးဖိုခန်းကနေထမင်းစားခန်း-အခန်းထဲမှာစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်ဘူဖေးဖို့ဖန် casserole ရုတ်သိမ်းရေးနှင့်အဘို့ခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါအဆင်ပြေခြမ်းထူမီးဖို MITT ဝတ်ထားလျှင်ပင်, လုံခြုံတဲ့ကိုင်သေချာကူညီကိုင်တွယ်။
ယခင်: ဘဲဥပုံ Shape SKU NO.277-278-279-2710-2711 အတွက် casserole
နောက်တစ်ခု: နဂါးအသွေးအရောင်စုံ Borosilicate Glass ကို SKU NO.2670
Borosilicate Glass ကို casserole
glass ကို casserole
ဘဲဥပုံ Shape SKU NO.2712 အတွက် casserole
က Round Shape SKU NO.273D အတွက် casserole
က Round Shape SKU NO.272D အတွက် casserole
ဘဲဥပုံ Shape SKU NO.277-278-279-2710 အတွက် casserole ...
က Round Shape SKU NO.274D အတွက် casserole
2019 Ambient Frankfurt Booth အပူခုခံတွန်းလှန် ...
Borosilicate Glass ကို Pot, Borosilicate Glass ကို casserole , Double Walled Tea Glass, Borosilicate Glass ကို Bakeware , Borosilicate Glass ကိုစားနပ်ရိက္ခာကွန်တိန်နာ , Borosilicate Glass ကိုစားနပ်ရိက္ခာကွန်တိန်နာ ,